Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lombono luqondile? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
59. Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. I…
AbaFarisi abangamaJuda babesebenzisa umthetho kaMose ukwehlulela uJesu. Abazange bafune ukufanelana noJesu wangaleso sikhathi, kodwa ngokukhuthala balandela umthetho kwaze kwaba yilapho kufinyelela ekutheni babethele uJesu ongenacala esiphambanweni, bembeke icala bengalandelanga umthetho weTestamente Elidala nokuthi akayena uMesiya. Kwakuyini umnyombo wabo? Kwakungekhona yini ukuthi abazange bafune izindlela zokufanelana neqiniso? Babenentshisekelo ngawo wonke amazwi ombhalo ongcwele, bebe bengenandaba nentando Yami nezinyathelo nezindlela zomsebenzi Wami. Babengebona abantu abafuna iqiniso, kodwa abantu abalandela ngokomthetho amazwi ombhalo ongcwele; bebengebona abantu abakholelwa kuNkulunkulu, kodwa abantu abakholelwa eBhayibhelini. Empeleni, bebengonogada beBhayibheli. Ukuze bavikele okungokweBhayibheli, baqhakambise isithunzi seBhayibheli, bavikele isithunzi salo, baze bafika ekubetheleni uJesu onomusa esiphambanweni. Lokhu bakwenze nje ngoba befuna ukuvikela iBhayibheli, nokugcina ukuma kwegama ngalinye eliseBhayibhelini nawo wonke amazwi aseBhayibhelini esezinhliziyweni zabantu. Ngakho-ke bakhethe ukushiya ikusasa labo nomnikelo wesono ukwahlulela uJesu, ongazange ahambelane nezimfundiso zombhalo oyingcwele, ukuya ekufeni. …
Njengoba kukhona indlela ephakeme, kungani uzofunda le ndlela esezingeni eliphansi esiphelelwe isikhathi? Njengoba kunamazwi amasha, futhi nomsebenzi omusha kakhulu, kungani uphila phakathi kwemibhalo emidala yemilando? Amazwi amasha angakuhlinzeka, okubonisayo ukuthi lokhu ngumsebenzi omusha; imibhalo emidala ayikwazi ukukwenelisa, noma igculise izidingo zamanje, okufakazela ukuthi ingumlando, futhi ayiwona umsebenzi walo mzuzu. Indlela ephakeme kunazo zonke, indlela entsha kunazo zonke, futhi ngomsebenzi omusha, akusho lutho ukuthi iphakeme kangakanani indlela yakudala, isewumlando wemicabanga yabantu, futhi akusho lutho ukuba wusizo kwayo uma uhlola okwedlule, iseyindlela endala. Nakuba ibhaliwe “encwadini engcwele,” indlela endala iwumlando; nakuba kungekho okubhaliwe ngayo “encwadini engcwele,” indlela entsha eyalo mzuzu. Le ndlela ingakusindisa, futhi le ndlela ingakushintsha, ngoba lokhu ngumsebenzi woMoya oNgcwele.
… Ngesikhathi sikaJesu, uJesu wahola amaJuda kanye nabo bonke labo ababemlandela ngokuhambisana nomsebenzi woMoya oNgcwele Kuye ngaleso sikhathi. Akazange athathe iBhayibheli njengesisekelo salokho abe ekwenza, kodwa wakhuluma ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe; wakushaya indiva okwakushiwo yiBhayibheli, futhi akazange afune eBhayibhelini ukuze athole indlela ayezohola ngayo abalandeli Bakhe. Kusukela ngesikhathi eqala ukusebenza, wasakaza indlela yokuphenduka—izwi elalingakaze liphathwe eziprofethweni zeTestamente Elidala. Akazange enze ngokuhambisana neBhayibheli, kodwa wavula indlela entsha futhi wenza umsebenzi omusha. Wayengakaze abhekise eBhayibhelini uma eshumayela. NgeNkathi Yomthetho, akekho owake wakwazi ukwenza izimangaliso Zakhe zokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni. Umsebenzi Wakhe, izimfundiso Zakhe, igunya Lakhe—akekho owayeke wakwenza lokhu ngeNkathi Yomthetho. UJesu wenza umsebenzi Wakhe omusha nje, futhi nakuba abantu abaningi bamsola besebenzisa iBhayibheli—futhi baze basebenzisa iTestamente Elidala ukuze bambethele—umsebenzi Wakhe walidlula iTestamente Elidala; ukuba lokhu bekungenjalo kungani abantu bambethela esiphambanweni? Akuve kungenxa yokuthi iTestamente Elidala lalingasho lutho ngemfundiso Yakhe, nekhono Lakhe lokuphulukisa abagulayo nokukhipha amadimoni? Umsebenzi Wakhe kwakungowokuvula indlela entsha, kwabe kungewona owokuqala uchuku ngamabomu nokumelana neBhayibheli noma ukuphetha ngamabomu iTestamente Elidala. Weza kuphela ukuzokwenza inkonzo Yakhe, ukuletha umsebenzi omusha kulabo ababemlangazelela futhi bemfuna. Akazange afikele ukuzochaza iTestamente Elidala noma ukuphakamisa umsebenzi walo. Umsebenzi Wakhe kwabe kungekhona ukuvumela iNkathi Yomthetho ukuthi iqhubeke ithuthuke, ngoba umsebenzi Wakhe awuzange uzihluphe ngokubonelela ukuthi wawungenalo iBhayibheli njengesisekelo sawo; uJesu wamane wafika nje ukuze enze umsebenzi ayefanele ukuwenza. Ngakho akazange achaze iziprofetho zeTestamente Elidala, noma asebenze ngokuhambisana namazwi eNkathi Yomthetho yeTestamente Elidala. Wakushaya indiva okwabe kushiwo iTestamente Elidala, akazange anake noma lalivumelana yini nomsebenzi Wakhe noma cha, futhi akazange anake nokuthi abanye baba ini ngomsebenzi Wakhe, noma ukuthi babewusola kangakanani. Wamane waqhubeka nokwenza umsebenzi okwakufanele awenze, nakuba abantu abaningi babesebenzisa ukubikezela kwabaprofethi beTestamente Elidala ukumlahla. Kubantu, kwakubukeka sengathi umsebenzi Wakhe awunasisekelo, futhi kwakukuningi ngawo okwakungavumelani nemibhalo yeTestamente Elidala. Ingabe akubona ubuwula lobu? Ingabe imfundiso iyadinga ukusetshenziswa emsebenzini kaNkulunkulu? Futhi kumele yini ukuba kuhambisane nokubikezela kwabaprofethi? Kanti phela, ubani omkhulu: uNkulunkulu noma iBhayibheli? Kungani umsebenzi kaNkulunkulu kufanele uhambisane neBhayibheli? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu akanalo ilungelo lokudlula iBhayibheli? Angeke yini uNkulunkulu akwazi ukushiya eBhayibhelini futhi enze omunye umsebenzi? Kungani uJesu nabafundi Bakhe babengaligcini iSabatha? Uma wayengaligcina iSabatha futhi enze ngokuhambisana nemiyalelo yeTestamente Elidala, kungani uJesu wayengaligcini iSabatha emva kokufika, kodwa kunalokho, wageza izinyawo, wamboza ikhanda, wahlephula isinkwa, futhi waphuza iwayini? Akuve konke lokhu kungekho emiyalelweni yeTestamente Elidala? Uma uJesu wayelihlonipha kakhulu iTestamente Elidala, kungani wazishaya indiva lezi zimfundiso? Kufanele wazi ukuthi yikuphi okweza kuqala, uNkulunkulu noma iBhayibheli! Njengoba eyiNkosi yeSabatha, ubengeke futhi abe yiNkosi yeBhayibheli?
Uma ufisa ukubona umsebenzi weNkathi Yomthetho, nokubona ukuthi abakwa-Israyeli bayilandela kanjani indlela kaJehova, kufanele ufunde iTestamente Elidala; uma ufisa ukuqonda umsebenzi weNkathi Yomusa, kufanele ufunde iTestamente Elisha. Kepha uwubona kanjani umsebenzi wezinsuku zokugcina? Kufanele wamukele ubuholi bukaNkulunkulu wanamhlanje, futhi ungene emsebenzini wanamuhla, ngoba umsebenzi omusha lo, futhi akekho owake wawubhala eBhayibhelini. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo senyama futhi waqoka abanye abakhethiweyo eShayina. UNkulunkulu uyasebenza kulaba bantu, uyaqhubeka esuka emsebenzini wakhe emhlabeni, uyaqhubeka esuka emsebenzini weNkathi Yomusa. Umsebenzi wanamuhla uyindlela umuntu angakaze ayithathe, futhi indlela okungekho muntu owake wayibona—umsebenzi kaNkulunkulu wakamuva emhlabeni. Ngakho umsebenzi ongakaze wenziwe phambilini akuwona umlando, ngoba manje yimanje, futhi usazobuye ube owakudala. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu futhi omusha kakhulu emhlabeni, futhi ngaphandle kwakwa-Israyeli, ukuthi sewuze wahamba wadlula esilinganisweni sakwa-Israyeli, waphinde wadlula ukubikezela kwabaprofethi, ukuthi umsebenzi omusha futhi omangalisayo ongaphandle kweziprofetho, kanti futhi umsebenzi wanamuhla okude le nakwa-Israyeli, uphinde waba umsebenzi abantu abangawuqondi futhi abangakaze bawubone ngamehlo engqondo. IBhayibheli lingaba kanjani nemibhalo ebeka ngokusobala ngalo msebenzi onjena? Ubani obengabhala ngakho konke ngomsebenzi wanamuhla, angashiyi lutho, kungakafiki isikhathi? Ubani obengabhala ngalo msebenzi onamandla futhi ohlakaniphe kakhulu ophambana nesiko encwadini endala ekhuntile? Umsebenzi wanamuhla awuwona umlando, ngakho, uma ufuna ukuhamba endleleni entsha yanamhlanje, kufanele ulishiye iBhayibheli, kufanele udlule ezincwadini zeziprofetho noma umlando weBhayibheli. Yilapho kuphela uyokwazi ukuhamba indlela entsha ngokufanele, futhi yilapho kuphela uyokwazi khona ukungena embusweni omusha kanye nasemsebenzini omusha. Kufanele uqonde ukuthi kungani, namhlanje, ucelwa ukuba ungalifundi iBhayibheli, kungani kukhona omunye umsebenzi ohlukene neBhayibheli, kungani uNkulunkulu engabheki eBhayibhelini ukuze athole izindlela zokwenza ezintsha futhi ezinemininingwane, kungani esikhundleni salokho kukhona umsebenzi onamandla nangaphezulu ongaphandle kweBhayibheli. Yilokhu konke okufanele ukuqonde.
Okwedlule：Abanye abantu, ekufundeni kwabo ngokubuya kweNkosi uJesu, basekela izifundo zabo kuphela eziprofethweni zeBhayibheli, kodwa abafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Iyini inkinga ngokwenza kanjalo?
Okulandelayo：Abanye abantu bakholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu kufanele lusekelwe eBhayibhelini, kodwa ingabe ukholo olusekelwe eBhayibhelini lungayifeza ngempela insindiso?
Ngenxa Yokwenza Umsebenzi Wami, Mina Nganikezwa Insindiso Enkulu kaNkulunkulu Ngaphandle Kwensindiso KaNkulunkulu, Ngabe Angikho Lapha Namhlanje Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka? Isimo sikaNkulunkulu Siwukulunga futhi ngaPhezu Kwakho Konke Siluthando